फुटबलका जादुगर मेसीले कति पढेका छन् ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ खेलकुद ∕ फुटबलका जादुगर मेसीले कति पढेका छन् ?
दीप संञ्चार असोज १०, २०७८ गते २०:४६ मा प्रकाशित
विगत ५ वर्ष देखि अर्जेन्टिना र स्पेनिस बर्सिलोनाको जसीमा यी फरवार्डको जदुबट दर्शक मोहित हुँदै आएका छन्।
विश्वकप सुपरस्टार लिओनल मेसिले फुटबलमा पीएचडि गरिसकका छन् भन्दा फरक पर्दैन। उनले फुटबलमा देखाउन र गर्न बाँकी कुनै पनि कला छोडेका छैन। तर उनले अहिले भने पिएसजिमा आफ्नी कला देखाउन पाएका छैनन् ।
६ विश्वको प्रतिष्ठित अवार्ड बा’लोन डिओर जितेका ३४ वर्षीय मसीले जीवन कति सम्म उच्च शिक्षा पढेका होलान रु यो कुरा धेरैलाइ थाहा नहुन सक्छ। सामान्यत स् फुटबल खेलाडीहरु सानै बाट खेलमा लागि परेका हुन्छन। फुटबल एकेडेमिमै हुर्किएका हुन्छन। उनीहरुले औपचारिक शिक्षा राम्रो पाएका हुदैनन। तर प्राय खेलाडीले धेरै थोरै पढिरहेकै हुन्छन ।
हालै मसीले एक कुराकानीमा आफ्नो एजुकेशनको बारेमा बोलेका छन्। निकै चर्चित चिनियाँ फुटबल कमेन्टर सँग को कुराकानीमा आफ्नो पढाईको खुलासा गरेका छन्। उनको भनाई अनुसार उनले औपचारिक शिक्षा १२ कक्षा सम्मको अध्ययन गरेका छन्। कतिपय देशमा ९(१२ कक्षाको अध्ययनलै उच्च शिक्षाको तह मानिन्छ भने कुनै देशमा ११ (१२ लाई उच्च शिक्षा मानिन्छ।
मेसी १३ वर्ष को हुँदानै फुटबल एकेडेमी भर्ना भएका थिए। बार्सिलोनाको ला मासिया एकेडेमी हुँदा नै आफुले उच्च शिक्षा लिएको बताएका छन्। केहि समय अघि पिएसजीमा अनुबन्ध भएका मेसिले ३ खेल खेलका छन् भने एक गोल पनि गर्न सकेका छैनन्।